यी हुन नेपालसंग आफ्नो सम्बन्ध भएका भारतीय चर्चित कलाकारहरु – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /हलिवूड/बलिवूड/यी हुन नेपालसंग आफ्नो सम्बन्ध भएका भारतीय चर्चित कलाकारहरु
यी हुन नेपालसंग आफ्नो सम्बन्ध भएका भारतीय चर्चित कलाकारहरु
4502minutes read
नेपालसंग साइनो रहेका बलियुड कलाकारहरु हेर्नुहोस ! बलियुड कलाकार हरु जुन भारत का भएता पनि नेपालसंग साइनो रहेका कलाकार हरु को बारेमा चर्चा गर्दै छौ ! नेपालीहरु लाई भारतीय कलाकार अर्थात बलियुड का कलाकार हरु धेरै नै मन पर्दछ बलियुड कलाकार हरुका नेपाल मा पनि धेरै फ्यान हरु रहेका छन् !
त्यति मात्र हैन केहि बलियुड कलाकार को नेपाल संग साइनो समेत गासिएको छ त्यसैले पनि नेपालीहरु लाई बलियुड भनेपछि जान्ने इच्या रहन्छ ! केहि भारतीय बलियुड कलाकार हरु जसको नेपाल संग पारस्परिक सम्बन्ध रहेको छ ! ति कलाकार हरु हुन् गोबिन्दा अहुजा,माला सिन्हा,भारती सिंह,श्रृति झा ,अहमद खान आउनुहोस चर्चा गरौ कसरि साइनो रह्यो यी कलाकारहरु संग !
नेपालीहरुको बलिउडप्रतिको सम्बन्ध, १, माला सिन्हा
बलिउडमा कुनै समयकी चर्चित रहेकी नायिका माला सिन्हा नेपाली हुन । उनको बुबा नेपाली क्रिश्चियन हुन् । माईती घर नामक चलचित्रमा काम गरेर बलिउडमा नै आफनो करियर बनाएकी माला सिन्हाले नेपालकी छोरी बनेर बलिउडमा नाम र दाम दुबै कमाईन् ।
२, भारती सिंह :
भारतको चर्चित कमेडीयन भारती सिंहमा पनि नेपालीकै रगत बगेको छ । उनको आमा पञ्जाबी थिईन भने बुबा नेपाली । थोरै नेपाली समेत बोल्न सक्ने भारती आफनो नेपालसँग गहिरो सम्बन्ध भएको बताउँछिन् ।
३,श्रृति झा :
टेलिभिजनकी चर्चित अनुहार श्रृति झा लाई धेरैले नेपाली हो भनेर भन्ने गरेका छन् । वास्तवमा उनी नेपाली भने होईनन् । तर उनी आफनो परिवारको साथमा लामोसमय काठमाडौँ बसेकी थिईन् ।बिहारमा जन्मिएकी श्रृतिले काठमाडौँमा मोर्डन इण्डियन स्कुलमा आफनो अध्ययन पुरा गरेकी हुन् । आफनो बाल्यकालनै नेपालमा बिताएको कारण उनी राम्रोसँग नेपाली बोल्न सक्छिन् । उनले जि टिभीको सिरियल कुमकुम भाग्य बाट बिषेश चर्चा कमाएकी हुन् ।
४,गोबिन्दा अहुजा :
बलिउडका चर्चित नायक गोबिन्दाले नेपाली मुलकी चेलीसँग विवाह गरेका छन् । उनी नेपालका ज्वाई हुन् । उनी हरेक कार्यक्रममा पुग्दा कोही नेपालीसँग भेटे नेपाल आफनो ससुराली घर भएको बताउँछन् ।
५,अहमद खान :
बलिउडका चर्चित कोरियोग्राफर अहमद खानको पनि नेपालसंग साईनो रहेको छ । उनको बुबा भारतीय मुसलमान हुन् भने आमा नेपाली हुन् । उनले धेरै पटक भारतीय च्यानल जि टिभीको कार्यक्रम डान्स इण्डिया डान्समार्फत आफनो आमा नेपाली भएको धेरै पटक बताईसकेका छन् ।
केहि बलियुड कलाकारको नेपाल संग साइनो समेत गासिएको छ। भारतीय बलियुड कलाकारहरु जसको नेपाल संग पारस्परिक सम्बन्ध रहेको छ ! ति कलाकार हरु हुन् गोबिन्दा अहुजा,माला सिन्हा,भारती सिंह,श्रृति झा ,अहमद खान आउनुहोस चर्चा गरौ कसरि साइनो रह्यो यी कलाकारहरु संग ! जुन माथी चर्चाररीचर्चा गरीसकेका छौ ।
रोमान्स गर्न पाएपछि आफ्नै भाउजु, सालीलाई समेत छाडेनन् यी बलिउड कलाकारले
विक्की कौशलसंगको प्रेम र विवाहवारे बल्ल बोलिन् कट्रिना, कहिले गर्दैछिन् विवाह ?
‘कपिल शर्मा शो’ की सुमोनालाई लाग्यो यस्तो ख’तरनाक रो’ग
करिना दोश्रो पटक र सैफ अली खान चौथो पटक बने आमाबाबु, तैमुर पनि नयाँ पाहुनाका लागि पूर्ण रुपमा तयार